Kufananidza thermomix mhando TM5, TM31 uye TM21 | ThermoRecipes
Kufanana pakati peThermomix modhi: TM5, TM31 uye TM21
MunaGunyana 2014 Vorwerk yakatanga mhando yayo nyowani inozivikanwa se TM5. Vazhinji vashandisi vanga vachichiwana pamusoro pemakore uye vamwe vaive nemhando dzekare vanga vachichivandudza. Nekudaro, sezvo michina iyi iine hupenyu hwakareba hwakareba, kuchine vakawanda vanoramba vachibika mu TM31 (yakagadzirwa muna 2004) uye, zvishoma zvishoma, ne TM21 (yakagadzirwa muna 1996). Iwe unoda kubika neese mamodheru? Zvakanaka, zvakakosha kuti iwe uzive iyo zvakaenzana zveiyo Thermomix TM5, TM31 uye TM21 mhando.
Saka zviripo sei madiki misiyano Pakati peTM5 neTM31, takafunga kuti zvinobatsira kunyora chinyorwa chinotsanangura musiyano mukuru uripo pakati pemarobhoti matatu kuti uve nemuenzaniso wauinayo, unogona kuramba uchinakidzwa nemaresipi edu nekuajairira zvizere nyaradzo uye pamusoro pezvose, Seguridad.
Kufanana pakati pe TM31 neTM5
Misiyano iri pakati pemhando mbiri idzi idiki zvakanyanya pane iya iri pakati pe31 ne21, saka zvichave nyore kugadzirisa mapapiro ako. Iwe unongofanirwa kufunga nezve zviviri zvakakosha zvinhu: iyo tembiricha yakanyanya and the kugona kwegirazi uye mudziyo wevaroma. Ngatione zvakadzama.
Iko kupisa kwepamusoro kweTM5 kuri pamusoro pe120º, nepo TM31 inongosvika 100º. Izvi zvinovhura hwakawanda hwezviitiko pamwe neiyo TM5, kunyanya kana zvasvika pakuita sautéing uye kukurudzira-kutsvaira.
Sautéed uye sautéed: muTM5 isu tinofanirwa kuronga 120º uye 8 maminetsi. Tichiri muTM31 tichaisa varoma tembiricha, maminetsi gumi. Iye zvino neTM10 iyo inomutsa-fries iri nani, yakawedzera goridhe. Inonyanya kuoneka patino sauté gariki, semuenzaniso, pamusoro pehove yakanyoroveswa.
Varoma tembiricha: MuTM31 tinoshandisa tembiricha yeVaroma pazvinhu zvese: kupisa neiyo varoma, kumhanyisa-kupisa uye kukwesha, kudzikisa zvinwiwa mumuto ... Zvisinei, muTM5 isu tinongofanirwa kushandisa tembiricha yevaroma kugadzira mweya uye kubika mukati iyo varoma mudziyo kana kudzikisa sauces.
Bika pa100º: Sezvo muTM31 neTM5 tinogona zvakare kubika miriwo pa100º, semuenzaniso, nekudaro kuchengetedza kuchengetedzwa kwemidziyo yechikafu kana mupunga, uyo unosara pakona yekubikira chaiyo.
Varoma mudziyo kugona yakawedzera ne10%, kubva pamarita matatu eTM3 kusvika ku31 yeTM3.300.
Iyo tangi yakawedzerawo kugona kwayo kubva pamalita maviri eTM2 kusvika ku31 yeTM2.200. Pano iwe unofanirwa kuve wakangwarira sezvo ma TM5 mabikirwo anogona kugadzirwa zvakakwana paTM31, asi kwete imwe nzira yakatenderedza nekuti girazi rinogona kufashukira. Saka kana iwe uchida kugadzira iyo TM5 recipe pane iyo TM5, ita shuwa kuti iyo yakanyanya kugona chiratidzo haina kupfuurwa (2 litita).
Iyo Varoma yakawedzerawo kugona kwayo uye izvi zvakanaka chaizvo se isu tinokwanisa kuisa zvimwe zvekudya zvekuzvipisa panguva imwe chete uye kuti vakasununguka kupfuura mumwe nemumwe, vachifarira kutenderera kwakanaka kwemhepo. Semuenzaniso, ikozvino tinogona kuisa maviri seabass kana bream munzira yakasununguka kana mimwe miriwo. Izvo zvakare zvinobatsira kana zvasvika pakuisa rectangular kana yakasarudzika kuumbwa kwepuddings kana puddings sezvo isu tichawana akawanda mamodheru.
Iine TM5 kumhanya gumi kana turbo yakawedzera nzira yese kusvika ku10.700 rpm (apo iyo TM31 yakasvika zviuru gumi). Izvi zvinoita gadziriro senge gazpacho kana mafuta ekuzora mutete munguva shoma.
Ngationei mutafura zvakanyanya.
Tafura yezvakaenzana TM31 uye TM5
Kupfungaira ine tswanda uye / kana varoma Varoma tembiricha Varoma tembiricha
Varoma tembiricha Varoma tembiricha
Saute kana saute Tembiricha yeVaroma - 10 min approx Kupisa 120º - 8 min approx
Max chinzvimbo. of girazi 2 litita 2,200 litita
Max chinzvimbo. of varoma 3 litita 3,300 litita
Mariposa Kunonyanyisa pakumhanya 5 Kunonyanyisa pakumhanya 4
Turbo (kana kumhanya 10) Inosvika zviuru gumi paminiti miniti miniti Inosvika zviuru gumi paminiti miniti miniti
Kufanana pakati pe TM31 neTM21
Heano a zvakafanana tafura mauri unongofanirwa kutevera mutsara unoenderana, ndiko kuti, kana kamukira yakagadziridzwa yeTM31 ichiti "spidhi yekumhanya" uye iwe uine TM21, zvaunofanirwa kuita chirongwa chekumhanyisa 1 nebhatafurayi… nyore, handiti?
Iye zvino une kiyi yeku chinja mabikirwo ese kune yako TM21 modhi.
Tafura yezvakaenzana pakati peTM31 neTM21
Bhaketi kumhanya Kurumidza 1 nefuturu
Tendeukira kuruboshwe Mariposa
Kupisa 37º Kupisa 40º
Kupisa 100º Kupisa 90º
Chopping, kumhanya 4 Chop, kumhanya 3 kana 3 1/2
Grate, kumhanya 5 Grate, kumhanya 4
Yakapetwa, inomhanya 7 kusvika 10 Yakapetwa, inomhanya 6 kusvika 9
Gomo rakajeka, kumhanya 3 1/2 Tasva zvakajeka, kumhanya 3
Sezvauchaona, pane misiyano inozivikanwa pakati pemamodeli 21 ne31, senge tembiricha shoma kana kumhanyisa kwemabasa ekutanga ekucheka, kugadzira netsiva uye kupaza.